Agwaetiti kacha mma na osimiri na Malaysia | Akụkọ Njem
Agwaetiti kacha mma na mmiri kacha mma na Malaysia
Mariela Carril | | Islands, Malaysia, Oge ntụrụndụ, Asia njem
Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia nwere ebe ndị mara mma ekwere m na oke osimiri na agwaetiti kacha mma n’ụwa dị. Ọ bụ ebe dị anya, ọtụtụ awa ụgbọ elu, mana ịkwụ ụgwọ ahụ dị mma nke mere na ọ bara uru ịbanye ụgbọ elu ma mee njem oge ụfọdụ.
Malaysia Ọ bụ ọchịchị onye kwuo uche ya mejupụtara ọtụtụ ókèala obodo ya bụ Kuala Lumpur. O nwere onu ogugu ndi mmadu ruru nde iri ato ya mere o buru otu n’ime obodo kacha biri na mpaghara a. Dị oké ọnụ ahịa bụ okwu ọtụtụ ndị na-eji akọwa obodo a. Chọpụta ihe kpatara ya!
1 Agwaetiti kacha mma na Malaysia
2 Osimiri kacha mma na Malaysia
Agwaetiti kacha mma na Malaysia
Agwaetiti dị na Malaysia ha dị nnọọ iche ya mere enwere ihe maka ụdị njem niile ma ọ bụrụ na ịchọrọ anyanwụ na oké osimiri, onyinye ahụ dị ịtụnanya. Nhọrọ ọ bụla ga-ehichapụ site n'echiche nke onwe gị, mana ọ bụ dịka m gwara gị n'elu, ị ga-aga njem ma chọpụta n'onwe gị.
Otu n'ime agwaetiti ndị mara mma bụ Perhentian. Ha nọ n’akụkụ ugwu ugwu ọwụwa anyanwụ nke Peninsular Malaysia ma bụrụ ndị a nnukwu ebe n'etiti ndị na-azụ azụ azụ nke uwa. Ha nwere mmiri kacha doo anya ma ọ bụ ya mere ị ga - eji nwee ike gaa snọkpụ esi n'ụsọ osimiri wee nwee ọ delightụ site n'ụgbọ mmiri bara ụba.
Si azu obodo ị nwere ike banye a ụgbọ mmiri na-aga maka a ije na- lee umu azu shark na nduru ma ọ bụ nwee ọwụwa anyanwụ dara. Na ghara ikwu banyere furu efu na ọdịda anyanwụ dina n'akụkụ ọkụ.
Enwere ụlọ nke ụdị na ọnụahịa niileSite na ndị dị oke ọnụ dị ka agwaetiti Tuna Bay na ndị dị ọnụ ala dịka Abdul Chalet. Iji ruo ebe ahụ, ị ​​ga-agba bọs na Kuala Lumpur, na ọdụ ụgbọ Hentian Putra, ma gaa awa itoolu. Ma ọ bụ gbagoro site n'isi obodo gaa Kota Bharu ma were tagzi na Kuala Besut n'ụsọ oké osimiri.
Tioman ọ bụ agwaetiti ọzọ mara mma. Ọ bụ ezigbo ewu ewu na ndị njem nleta ebe ọ bụ na Time magazine mere ya baptizim agwaetiti kacha mma n’uwa n'ime 70. Njem nlegharị anya emeela ka ọ gbanwee ntakịrị kemgbe ahụ mana obodo ndị ahụ ka na-adọrọ mmasị ma ebe obibi ha dị iche iche.
Nwere ike iji ụgbọ mmiri si Singapore ma ọ bụ bọs si ebe ọ bụla na Malaysia gaa Mersing wee si ebe ahụ were ụgbọ mmiri were awa abụọ. Ma obu na obere ugbo elu site na Kuala Lumpur. Luxurydị okomoko nke Asia na-amasị gị?
Ya mere akara aka bu Asụsụ Langkawi. Akụkọ mgbe ochie nwere ya bụ agwaetiti a bụrụ ọnụ, ọ bụ ezie na ọdịmma gbanwere mgbe 80s kpebiri na ọ ga-eduzi akụ na ụba agwaetiti ahụ maka njem. Agwaetiti ahụ dum ọrụ-abaghị ya mere nke taa odi nma.
Ọ nwere hotels, osimiri, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, njem nleta na ọmarịcha eriri nke mita 2.200 nke ruru mita 710 n'ogo ma na-enye gị ohere ịkele ya na mma ya niile. N'ihe banyere ebe obibi, ị nwere ike ịhọrọ site na ụlọ nkwari akụ boutique na ụgbụ a na-akụ oyibo ruo oge anọ.
Nweta ebe ahụ ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla n’ihi na a na-esi n’ụgbọelu eme njem kwa ụbọchị.
Maka ụfọdụ akụkọ Malay na ihe nketa ị nwere ike ịga Penang, nke a tụlere na Pearl nke East na Alaeze Ukwu Britain. Ọ dị mkpa n'okporo ụzọ azụmahịa nke Bekee n'etiti India na ndị ọzọ Asia na agbanyeghị na ọ dabara na nchefu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke narị afọ nke XNUMX, ọ gbalịsiri ike ịmaliteghachi onwe ya dị ka ebe ndị njem nleta.
Georgetown bụ Ihe Nketa Worldwa dịka UNESCO si kwuo, dịka ọmụmaatụ, gọọmentị etinyela aka na imeziwanye njem njem ọha na eze, ịkọ osisi ọhụrụ, na-eme mpaghara ndị na-agafe agafe na mmemme ọdịbendị. Ọ na-ewu ewu maka ya ụlọ nri n'okporo ámá na ndị njem na-abịakarị n’ụgbọelu n’ihi na o nwere ọdụ ụgbọ elu mba ofesi.
Ọ bụrụ na mmiri mmiri na-amasị gị, ebe kachasị mma bụ Labuan, otu agwaetiti raara onwe ya nye iji nweta ọtụtụ puku ụlọ ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ ego. Ogige ego maka ndị ohi na-acha ọcha, anyị nwere ike ịsị, ọ nwere mpaghara nke ya Formula 1.
Mana dịka m kwuru, n’okpuru mmiri ka akụ dị zoro ezo maka ndị dị iche iche na enwere ụgbọ mmiri Australia, american na ọbụna ụdị ili ozu agha. Dịka ọmụmaatụ, kwa afọ, a na-echeta ọnwụ nke ndị agha 3900 Allied na Agha Worldwa nke Abụọ.
Maka ịnọ naanị gị, otu n'ime ndị na-eme ka ị banye n'ime uche gị, bụ agwaetiti ahụ site n'aka Layang-Layang. Ọ bụ agwaetiti amụrụ site na ala agbapụtara site n'oké osimiri ịtọlite ​​ọkọlọtọ na mpaghara ndị China na mba ndị ọzọ kwuru.
Mmiri dị ọcha nke nwere ogbu mmiri nke na-agbada na mberede karịa ihe karịrị puku mita abụọ n ’ụsọ osimiri bụ paradaịs ọzọ maka ndị iche. N'eziokwu, a gụwo ya n'ime mmadụ iri ahụ saịtị kacha mma n'ụwa. Enwere coral mara mma mara mma na mita 40 nke visibiliti. Na shark, dolphins, barracudas, nduru, na stingrays.
Agwaetiti ọzọ mecca maka mmiri bụ sipadan ọ bụ ezie na iji ghara itinye ihe ndị dị ndụ na ihe ize ndụ ruo oge ụfọdụ ugbu a, ọ bụ naanị 120 dị iche iche ka a na-ekwe kwa ụbọchị. Coral, ọtụtụ puku azụ, shark, turtles nke ụdị dị iche iche ma ọbụnadị ebe a na-eli ozu n’okpuru mmiri.
Agwaetiti dị iche iche redang, agwaetiti nkeonwe oke ya na ebe ezumike ya nile mara nma (nke ndi Sultan nwe) na Pulau Pangkor, na mmụọ Malay ha ka dị na ndepụta ahụ.
Osimiri kacha mma na Malaysia
Ugbu a bụ oge nke osimiri. Inwe ọtụtụ agwaetiti na Malaysia mgbe ahụ e nwere ọtụtụ narị mara mma osimiri na ọtụtụ n'ime ha na-na o siri ike mara ya mere na ha bụ ndị dị ọnụ ala, nwere obere njem nleta na ndị ọzọ eke.
Ndị kasị ewu ewu nọ n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke Malay Peninsula.. Ha dị mfe iru n'ihi na enwere ụgbọ elu dị ọnụ ala ma ha bụ ebe kachasị amasị maka izu ụka izu ụka. Lee bụ osimiri redang, ndị nke agwaetiti Perhentian na ogige ntụrụndụ mmiri nke agwaetiti ahụ Tioman.
N'aka nke ozo bu osimiri dị n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke Malay Peninsula. Ana m ekwu maka agwaetiti na-akwụghị ụgwọ ọrụ Asụsụ Langwaki, nke nwere obere osimiri mara mma ma mara mma na ọtụtụ ndụ ndị njem, na-enweghị oge udu mmiri na-emetụta ha yana mmiri mmiri na-agaghị echefu echefu, ụsọ mmiri nke agwaetiti ahụ Pangkor na Borneo, agwaetiti nke Malaysia, Indonesia na Brunei kekọrịta.
Ihe dị mkpa mgbe ị gara Malaysia na agwaetiti ya na ụsọ mmiri ya bụ gbaba osooso. Oge udu mmiri dị n’agbata Nọvemba na Machị, n’akụkụ ụwụwa anyanwụ. Mmiri na-ezo nke ukwuu. Emesịa ọ dị mkpa iji weta ọtụtụ ihe eji eji anwụ anwụ na ọgwụ ahụhụ.
Ihe ndi ozo, ochicho nke ikpori ndụ na ibi na paradaịs elu ụwa n’adịghị ka m ga-akọ ụkọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Islands » Agwaetiti kacha mma na mmiri kacha mma na Malaysia
Isiokwu na-akpali mmasị ma oge ezumike anaghị edo m anya. Ọ bụrụ na m gaa n'October nke agwaetiti ndị m nwere ike ịga leta nke na-enweghị ihu igwe dị njọ?!
Zaghachi Carmina Yébenes Aguilera
Ezumike ezinụlọ na Catalonia, L'Ametlla de Mar
Kedu ihe ị kwesịrị ịma ma ọ bụrụ na ị gaa Chile?